अमेरिकाबाटै प्रेम बानियाले देशको राजनितीप्रति पोखे आक्रोश, भने- नेपाल सतीले सरापेकै देश रहेछ
काठमाडौं, १८ बैशाख । नेपालका टेलिभिजनहरुमा खरो प्रस्तोताको रुपमा चर्चीत पत्रकार प्रेम बानियाले लामो समयपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा देशको राजनैतिक परिवेश र उतार चढाब प्रति आक्रोस पोखेका छन् । राष्टियताको
हाम्रो स्तन हाम्रो रहेन, पवित्रता, पाप वा लाजका कारण : स्तन हाम्रो मर्जी अर्काको ?
म मोटी केटी थिएँ । त्यसैले सायद मेरा स्तन मेरै उमेरकी केटी भन्दा चाँडै विकसित भए । ११ वर्षको उमेरमा मलाई एउटा ब्राको जरुरी भयो । मेरी आमाले सदा यसलाई
‘प्लीज ! मेरो बुढोको पछि नलाग्नुस, मसँग छोरो छ’
इन्द्रसरा खड्का, ‘प्लीज मेरो बुढोको पछि नलाग्नुस मसँग छोरो छ, फेसबुकमा प्रोफाइल हेर्दा तपाईं पनि यति बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ, प्लीज ।’ नचिनेको नम्बरबाट आएको फोन उठाएर हेलो भन्न नपाउँदै एकै
‘अब हामी मधेशीले भन्नै पर्छ, राजा आऊ देश बचाऊ !’ : सद्भावना पार्टी अध्यक्ष सरिता गिरी
नेपाल सद्भावना पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष सरिता गिरीले आज आफ्नो फेसबुक पोस्ट मार्फत राजालाई मिस गरेको भन्दै राजा बिरेन्द्रको सम्झना गरेकी छिन् | केहि समयको अन्तरमा दुई वटा पोस्ट गरेकी गिरीले
युद्धमा बेचिएको यौवन !
प्रतिध्वनि भइरहेको थियो ।कहाँ जाने ? उसलाई हेर्दै भने दाइ पनि कहाँ रे ? बाहिर जाऊँ न यसो बरालिएर आउँला ।मर्ने मन छ कि क्याहो तिम्लाई । सुनेका छैनौँ र
शालीन राजनेता पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको आज स्मृति दिवस
कोत पर्वपछि स्थापाना भएको राणा शासन १०४ वर्षसम्म निरंकुश रूपमा चल्यो । त्यसबेला नागरिकलाई कुनै पनि स्वतन्त्रता थिएन । राजनीतिक, शैक्षिकलगायतका क्षेत्रमा पूर्ण बन्देज थियो । शिक्षाको महत्त्व बुझेका परिवारका
‘श्रीमानले विदेशबाट पठाएको पैसा फजुल खर्च गर्थें तर गलत रहेछ !’
दिपा आचार्य म, श्रीमान अनि दुई जना छोरीसहित मेरो ४ जनाको परिवार । श्रीमानले नेपालमै केही काम गरेर यतै केही गरौं भन्ने पनि सोच्नुभएको थियो । तर काम गर्दा पनि
अंग्रेजी शब्द ‘गभर्नेन्स’को अर्थ ‘सुशासन’ले समेट्न सक्तैन : पालिका र प्रदेश सरकारमा पारदर्शिता, उत्तरदायिता र विश्वसनीयता
अंग्रेजी शब्द ‘गभर्नेन्स’को अर्थ ‘सुशासन’ले समेट्न सक्तैन । ‘गभर्नेन्स’ शब्दले संस्थागत सम्बन्ध, समन्वय, पारदर्शिता र शून्य सहनशीलता जस्ता धेरै आयाम समेट्छ । यो साँगुरो शब्द होइन । यसैले ‘गभर्नेन्स’ लाई
कसले चोर्यो प्रधानमन्त्रीको गाडीबाट तेल ?
ड्राईभरको तलब बाह्र हजार खलासिको तलब भत्ता झन्डै एक लाख अनि तेल नचोरेर के चोर्ने उत्तर चाहियो सरकार?? अच्चम्म छ बा! के तेल ड्राईभरले नचोरे कसले चोर्छ? शिक्षकले सिप चोर्छन,
सरकार सीके राउतलाई जेल हाल !
– सरगम भट्टराई संक्रमण कालको फाईदा उठाएर मधेसमा हाका हाकी स्वतन्त्र मधेसको नारा लगाएर भारतमा बसी नेपाल बिरोधी गतिबिधि गरी जनता भड्काउने सि. के. राउत अहिले मधेशमा स्वतन्त्र मधेश भन्दै